Shiinaha FOTON U12D warshad iyo soosaarayaasha | Foton
Tababaraha kala duwan ee Foton 12m waa muujinta ugu badan ee tayada, amniga, isku halaynta, waxtarka sare, u adeegida dalabaadka suuqa iyada oo ay la socoto shakhsiyadeeda xoogan iyo saameynta muuqaal ahaaneed.
Guud ahaan Cabbirka 12000 * 2550 * 3790
Gawaarida Gawaarida 6000
Culayska Curb 13T
Awood Fadhi 32 + 1 + 1/49 + 1 + 1
Qaab dhismeedka jirka Monocoque / Semi-monocoque
Heerka Qiiqa EURO II - EURO V
Qeybta Luagge 10 m3
Muuqaalka Sare Qaab dhismeedka hore ee Crown-qaabeeya: naqshad qurux badan oo qurux badan, oo muujineysa muuqaalkeeda haybad leh; Muraayadda sare: oo leh xagal 50 darajo xagal-joog ah oo iska caabbinta hawada hoose, oo muhiim u ah keydinta tamarta; Gidaarka dhinaciisa: naqshadeynta la hagaajiyay oo leh astaamo firfircoon oo kooban.
Awoodda korantada ee Dahabka ah Waxay la midowdaa mashiinka Cummins ISG, gudbinta ZF, SACHS xajmiga iyo WABCO ABS iyo ESC (ikhtiyaar), iyagoo muujinaya waxqabadka ugu fiican iyo qiiqa hoose.
Naqshadeynta naqshad fudud iyo qaab qaybsan;
2000bar tiknoolajiyadda jet-cadaadiska sare;
Hawlaha cusub iyo qalabka.
Miisaanka fudud, guryaha aluminium;
Qiiqa buuqa oo hooseeya iyada oo la adeegsanayo qalab casri ah;
Isku-duwayaasha dayactir la'aanta ah ee ka faa'iideysanaya inta ay nool yihiin oo dhan;
Saliida nolosha oo dhan ayaa la heli karaa.
Waxay gacan ka geysaneysaa kordhinta nolosha taayirka ilaa 10%;
Waxay hagaajineysaa xakamaynta gawaarida inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa degdegga ah;
Waxay kaa caawineysaa inaad iska ilaaliso silbashada gawaarida iyo jackknifing inta lagu jiro bareega;
Kordhinayaa waxtarka bareegyada dhammaan
Isku dheelitirnaan sare oo joogto ah
Waxqabadka kaqeybgalka jilicsan;
Caabbinta kuleylka sare (yaraanaya);
Heerka xirashada Low & xasilloonida xawaaraha sare;
Majiro jaangooyooyin isbeddel;
Deegaanka la jaan qaada wax soo saarka iyo
Qaybta mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa alaarmiga heerkulka ee la socodka waqtiga-dhabta ah iyo aaladda is-deminta si loo ogaado kormeerka waqtiga-dhabta ah; qalabka ololka u adkaysta iyo qalabka A-fasalka u adkaysta ololka oo leh waxqabad wanaagsan oo nabadgelyo leh ayaa loo isticmaalaa agagaarka isha kuleylka.
Basaska Foton waxay maraan baaritaanka adag ee gawaarida iyo tijaabinta gawaarida in kabadan 100 kun oo kiilomitir xaalada noocyada wadada ee kaladuwan iyo xaaladaha cimilada ugu xun sida heerkulka sare, heerkulka hooseeya ama cadaadiska hooseeya.
Qaab dhismeed adag, basaska Foton waxay iska caabbiyaan shilalka dhinac-ka-dhaca iyo madax-isku dhaca ah sidoo kale waxay ka hortagaan cirbadaha dambe. Kahor intaysan bilaabin adeegga, waxay maraan tijaabooyin adag iyo xaqiijin.